Semalt Expert On How To Fight Ransomware Mu Windows Uye Gara Wakachengeteka
Hazvingave zvisina kururama kutaura kuti hurukuro yekudzikinura yakadzivirira huwandu hwemakombiyuta munyika yose, uye yakaremara mafoni emafoni munyika dzakasiyana.
Tisati taenderera mberi nechinhu chipi nechimwe, tinofanira kunge tine pfungwa yekudzikinura. Jason Adler, Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt , anotarisa tsanangudzo iyi uye nzira dzekudzivisa kutambudzwa.
Rudzikinuro nderimwe yenzira dzakaipisisa dzemakombiyuta - mongo database tool. Iyo inokwanisa kukanganisa chero rudzi rwemhando yehutachiona yehurongwa uye chero shanduro mukati mechipiri. Nyanzvi dzekombiyuta dzinotaura kuti dzinopfuura mabhiriyoni maviri Windows PCs dzakatapukirwa munyika yose dzine ransomware mumwedzi ichangopfuura. Chinonyanya kukosha chevashandisi ndiyo kombiyuta yezvirwere uye zvipatara.
Kana rudzikinuro rwunopinda makombiyuta ako, zvinogona kuvhara mafaira mune nhamba huru. Saka, haugoni kuwana deta yako. Chinangwa ndechokugadzirisa kuwanika kwako kune mapurogiramu mashomanana uye mafaira kuitira kuti vaseki vagokukumbira mari. Kuti udzorere kusvika kwako, iwe unofanirwa kubhadhara chimwe chinhu kubva pa $ 300 kusvika ku $ 3,000. Vaseki havazokubvumiri kuti muwane iyo faira nemafuta ayo kusvikira mabhadhara rudzikinuro zvachose kana zvishoma.
Mumwedzi ichangopfuura, nhamba huru yemakombiyuta yakave yakakanganiswa pasi rose. Semuenzaniso, zvipatara zvakasiyana-siyana zveNHS zvakatapukirwa, uye makombiyuta avo akaparara nezvose..Kwete izvi chete asiwo UK zvirongwa zvehutano zvehutano zvakapfigwa mwedzi wapfuura, uye varwere vakasiyana-siyana vakanga vasingabvumirwi kuzvipatara nekuda kweiyi nyaya. Makombiyuta anopfuura zviuru gumi muRussia akakuvara zvikuru. Mamwe mahofisi eFedEx muUnited States uye makambani akasiyana-siyana muCanada akabatwa nehurudzikinuro. Chimiro chekurwisana kwakabatana nematambudziko emavirusi anonzi Wana Decrypt anongopinda mukati memakombiyuta uye achivabata mumwero mukuru.
Unowana sei rudzikinuro?
Kune dzimwe nzira dzekudzikinura infects zvemakombiyuta. Nzira inonyanya kupararira ndeyokubatanidza ma email. Vakuru vanokutumirai maimeri nemafuta ane hutachiwana uye mawindo akanaka e-pop-up. Mharidzo yavo haifaniri kuzarurirwa uye kuverengwa chero zvakakosha. Mawebsite akavharwa anowanzochengetedza mavairasi uye malware kune maitiro ako uye runza zvinhu izvo zvisina kudzivirirwa kuti utapukidze mamwe mafaira ako. Kana iwe uchiona zvimwe zvinganetseka pawebsite yako, unofanirwa kuisa antivirus software yekuedza plugin kuti ibvise zvayo. Zvimwewo, unogona kutaura nechiteshi chemapurisa ari pedyo kana kukashanyira nyaya kune FBI nokukurumidza.
Nzira yekudzivirira sei rudzikinuro?
Mishumo yakasiyana inoratidza kuti kuregererwa kwakakonzera kukanganisa kwakanyanya kune nhamba huru yemakombiyuta pasi rese. Vakawanda vevanhu vane Windows neLinux vanotapukirwa nayo. Nzira yakanakisisa yekugara yakachengetedzwa nekudzivirira malware ndeyekuchengetedza Windows yako yakarongedzwa. Iwe unofanira kugara uchiisa shanduro dzemazuva eWindows uye kuchengetedza zvirongwa zvadzo zvakachengetedzwa. Rudzikinuro runopararira nokukurumidza nokuti makombiyuta akasiyana-siyana anoshandisa mavhesi ekare eWindows. Kuvandudza Windows nevekufambisa hazviti kutora nguva yako yakawanda; iyo ichakuchengetedza iwe yakachengeteka paIndaneti uye inogona kuchengetedza mafaira ako zvakanyanya.
Vakawanda vevanhu vanomira kana kubvisa yeWindows update sarudzo mumitambo yavo ye WiFi. Iwe haufaniri kuita izvozvo sezvo zvingakonzera zvinetso zvakakomba zvekombiyuta yako.
Isa nekuvandudza shanduro software
Pakupedzisira asi kwete zvishoma iwe unofanira kuisa nekuvandudza zvigadzidzo zvekuchengetedza nguva dzose. Zvimwe zvekuzivikanwa kwechitatu software uye mapurogiramu ndeye AVG Antivirus, Avira Free Security Suite, Avast Free Antivirus, Bitdefender Antivirus Software uye Panda Free Antivirus.